Dibadbax lagu Taageerayo Dowladda Iyo Waxqabadkeeda 100-ka maalin oo ka dhacay Muqdisho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Dibadbax lagu Taageerayo Dowladda Iyo Waxqabadkeeda 100-ka maalin oo ka dhacay Muqdisho[Sawirro]
MUQDISHO – Waxaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho dibadbax ballaaran oo ay ka qeybgaleen kumanaan shacab ah iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dowladda Federaalka,kaasoo lagu taageerayey dowladda iyo waxqabadkeeda 100-ka maalin.
Dibadbaxa ayaa ,waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre,wasiiro,xildhibaano,saraakiil ciidan,ciidanka baambeyda iyo shacab ka kala yimid 17-ka degmo ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo khudbad halkaas ka jeediyey ayaa ku dheeraaday ka hadalka waxqabadka 100-ka maalin ee dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo.
Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in lix bilood gudaheed lagu gaari doono horumar iyo Isbedallo badan.
Madaxweyne Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna halkaas hadal ka jeediyey,wuxuuna sheegay in ugu horreyn shacabka iyo dowladda oo mid ah lagu gaari karo gull waaweyn,horumar,mani iyo dib u dhis dalka ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Muqdisho ay ka qurux badnaan doonto caasimadaha dalalka Afrika ,isbadel buuxdana la arki doono 4-ta sano ee soo socota.
Madaxweynaha Soomaaliya oo arrimo badan ka hadlay ayaa soo hadal qaaday la dagaalanka Al-Shabaab,wuxuuna mar kale ku celiyey baaqa ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee aamisan fikirka Al-Shabaab ay dowladda kusoo biiraan kana tanaasulaan fikirkooda.
Hoos ka daawo sawirada dibadbaxa